Sheekada Filimka Daddy: Arjun Rampal wuu dadaalay balse filimka fariintiisa ayaa liidato – Filimside.net
Sheekada Filimka Daddy: Arjun Rampal wuu dadaalay balse filimka fariintiisa ayaa liidato
September 8, 2017 Zakarie Abdi
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Daddy ee hogaamiyaha ka yahay Arjun Rampal sidoo kalena looga hadlaayo nolosha Gaangester-kii Arun Gawli.
Jilaayaasha filimkaan: Arjun Rampal, Aishwarya Rajesh, Rajesh Shringarpore, Nishikant Kamat, Farhan Akhtar
Muxuu ku wanaagsan yahay filimka Daddy: Inaba caadi ma ahan Arjun Rampal sida uu isugu ekeysiiyay gaangester-kii Arun Gawli iyo bandhiga quruxda badan ee uu xidigaan sameeyay.
Muxuu ku liitaa filimka Daddy: sheekada filimkaan ayaa aad u liidato mana lahan bilaaw ilaa dhamaad si wacan kuu soo jiidanayo.
Daawo ama ha daawanin: Arjun Rampal bandhigiisa kaliya ayaa u daawan kartaa hadii kale waad iska dhaafi kartaa
Fariinta Filimka Daddy oo kooban: Filimkaan waxaa looga hadlaa sanadii 1976 iyo markii Arun Gulab Gawli (Arjun Rampal) noloshiisa soo hano qaaday, marka hore wuxuu yahay wiil nolol dhexaad ah ku nool kadib Gaangester ayuu noqonaa ilaa uu siyaasi awood badan ka noqdo.
Waxaa xasuus ahaan looga sheekeenaa kooxdii BRA (Babu, Rama, Arun) uu Arun sameeyay kuwaas oo Mumbai gil gileen iskuna heesteen inay sharciga iyaga ka sareeyaan.
Maalin maal maha ka mid ah Arun Gulab Gawli (Arjun Rampal) wuuxu go’aan ku gaaraa xumaan kasto oo uu bartanka kaga jiray inuu iska dhaafo xaaskiisa Zubeida (Aishwarya Rajesh).
Arun Gulab Gawli (Arjun Rampal) wuxuu soo aadaa guriga saaxiibkiis Rama si uu ugu sheego inuu arimaha xumaanta inuu iska dhaafayo balse nasiib daro wuxuu arkaa Rama oo ku baxaayo ama uu dilaayo askariga mayalka adag Vijaykar Nitin (Nishikant Kamat).
Sidaa darteed Arun go’aankiisa ayuu ka laabanaa oo ahaa inuu gaangester-nimada iska dhaafo waxaana raadsanayo taliye Vijaykar Nitin (Nishikant Kamat) oo rabo inuu Arun xabsiga oo dhigo ama gacantiisa ku toogto.
Arun asigoo dabagal uu ku haayo Vijaykar Nitin (Nishikant Kamat) ayuu hadana shacbiyad badan leeyahay siyaasadana heer sare ka gaaraa.
Hadaba Arun arimaha xumaanta ma iska dhaafi doonaa sidoo kalena taliye taliye Vijaykar Nitin (Nishikant Kamat) ma heli doonaa caddeyn uu Arun ku xiro?
Maxaa laga yiri isku xirka sheekada filimka Daddy: Director Ashim Ahluwalia ayaa qaladka ugu weyn galay madaama uu sheekada Daddy u cadaalad fali waayay sidoo kalena jiha toosan uma yeelin fariinta xasaasiga ah ee uu doortay.
Daddy waa filim Gaangester oo aan laheyn mada daalo adag sidoo kalena isku xirkiisa ahayn mid adag oo qiiro badan waana nasiib daro fariin waaqici ah in si dawadayaasha soo jiidan karto loo dhigi waayo.
Bandhiga Jilayaasha: Arjun Rampal wuxuu la yimid door waligiis lagu xasuusan doono, maba loo maleeyo jilaa ee waxaa si dhab ah loogu maleeyaa gaangester Arun Gawi-gii dhabta ahaa.
Daddy kaligiis ayaa loo daawan karaa sida quruxda badan ee uu xidigaan filimkaan ugu hagar baxay weliba doorkaan jilaa kasto ma sameyn karo waana amaan uu Arjun mudan yahay.
Nishikant Kamat doorkiisa askariga mayalka adag isagana waaa mid muhiim u ah sheekada filimkaan si wacana uu kaga baxsaday bandhig ahaan.
Gunaanad: Daddy waa filim aad u liito sheeko ahaan iyo isku xir ahaan, kaliya Arjun Rampal bandhigiisa ayaa loo daawan karaa mana ahan mid meel dheer gaarsiin karto.
Dadka filimada ka faaloodaan cel cleis ahaan waxay siiyeen 2/5 filimkaan weliba labada dhibcood bandhiga weyn ee Arjun sameeyay ayuu filimkaan ku helay.
Dhanka Boxoffice-ka Daddy cidna kama warqabto si guud in maanta tiyaatarada la saarayo sidoo kalena tiyaataro xadidan ayaa laga daawan doonaa, loolanka oo sareeyo iyo fariintiisa oo liidato waxay ka dhigan tahay in filimkaan fagta hoose si liidato ku furmi doono kadibna gadaal kama kici karo madaama ay sheekadiisa liidato kaliya Mumbai iyo hareeraheeda inuu ganacsi muuqdo ka sameeyo ayaa macquul ah.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Daddy:
Waxaa Aqrisay 685
Sxbo waxan.raba ninkan.ma.nol.yahay.oo tarikhadisa lagu.hadlayo filmkan muxuu.ah.bal.no.sharax.ma.la.dilay.mise wuu xiran.yahay tarikhadisa.bal.nala wadag